Umkroli uMateyu Simmonds Ubonisa uyilo lwangaphakathi kwiiBhloko eziMncinci zeMarble kunye nelitye Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMateyu simmonds ngumzobi osekwe eCopenhagen oveza ii-basilicas ezincinci, i-rotunda, iintsika, kwimarble kunye nelitye. Waqala ukuba nodumo ngobugcisa bakhe obunomdla umva ngo-2014, kwaye ubuchule bakhe obuyindibanisela yindibanisela yezakhono awazifumanayo ingcibi yobungcali kunye nomdla wakhe oqhubekayo kwizakhiwo zamatye ezingcwele ezazisusela ebuntwaneni bakhe. Ngononophelo nangokuchaneka, usebenzisa imigaqo eqhelekileyo yoyilo ukuphonononga iimpembelelo ze iifom ezahlukeneyo zemifanekiso.
Iziqwenga zeSimmonds ziqala ukusuka imiqolomba yale mihla, iisayithi zonqulo ezahlukileyo zemilingo (ichedhedral, iicawa), kumnandi Iikholamu zamaGrike, zamaRomanjl. Uvavanya ngezinto zakhe zokusebenza, ekrola imibala eyahlukeneyo kunye nezinto ezenziwe ngezinto zesiko. Sonke isakhiwo okanye isakhiwo siqinile kutyhilwe kumanqaku okutshintshakunye ii-angles zokukhanya ezahlukileyo ezinokuvezwa ukubonisa iinkcukacha ezahlukeneyo ukuchaza izithuba ezincinci.
Kukho into ezolisayo malunga nemifanekiso yakhe eqingqiweyo, ebonisa ukuba sinokubona iimeko ngokucacileyo xa sizijonga ngelinye icala. Okanye mhlawumbi yile uyilo olungenanto zikhangeleka ngathi yindawo ekhuselekileyo, ethambileyo nehleli emaweni, Efana nezindlu ezifihliweyo ezingcwele, apho unokubuyela ngaphakathi ukuze uzolile. U-Matthew Simmonds ucinga ngeentlobo zeendawo kuxhomekeke ekumangaliseni afuna ukukunika, okuhlala kucenga imvakalelo yobuncinci obubulalayo, Ndiziva ndikhuselekile, kodwa hayi ngobukhulu obungaphantsi, obabuza ubudlelwane phakathi kwendalo kunye nenyathelo lomntu. Emva koko sikushiya i vidiyo emva kokugqitywa komzobo wemabula ngumzobi uMatthew Simmonds ePietrasanta e-Itali, idolophu yakuloMichelangelo.
UMateyu simmonds waphumelela ngeembasa kwi-BA kwiMbali yobuGcisa evela kwiDyunivesithi yase-East Anglia ngo-1984, ikhondo lomsebenzi wakhe wawukhethekile kubugcisa nakwizakhiwo zamaxesha aphakathi. Emva kokusebenza iminyaka eliqela njenge umzobiKude kwaba ngo-1991, wafunda ubuchule bokwenza amatye e-Weymouth University. Usebenze ekubuyiselweni kwezikhumbuzo ezininzi zesizwe eNgilane, ngaphakathi kwale misebenzi enye yezona zibaluleke kakhulu I-Abbey yaseWestminster, kwaye i ISalisbury kunye neEly Cathedrals. Ngo-1997 wafudukela ePietrasanta, e-Italiya, apho waye wagagana nomhombiso weklasikhi usebenzisa imarble. Wafumana ukwamkelwa kwakhe okokuqala njengomdwebi weqonga ngo-1999 emva kokuphumelela okokuqala ibhaso kumsitho wesibini wokubonisana eVerona. Ukusukela ngoko uthathe inxaxheba kwindibano zemifanekiso eqingqiweyo kwihlabathi liphela kwaye wenze umboniso e-UK, Italy, Germany, Denmark, China, Australia nase-USA Ngo-2014 wafuduka nosapho waya eCopenhagen, apho ahlala khona ngoku usebenza .
Ukwenza umdlalo wezithuba zokwakha kwinqanaba elincinci, ilitye eliqinileyo apho imifanekiso eqingqiweyo ivulwa khona kutyhila imihlaba yangaphakathi, Ukutshintsha ngokuxhomekeka kwinqanaba lokujonga njengoko utshintsha, kwaye ukukhanya kudlala indima ebalulekileyo kwinkcazo yemifanekiso eqingqiweyo. Ukhuthazwe bubomi obude ngothakazelelo lwezakhiwo zamatye, kwaye ngokusekwe kwizakhono ezifundwe njengomzobi welitye lokwakha, umsebenzi uziswa eSimmonds. Ngokusekwe kulwimi olusemthethweni nakwifilosofi yoyilo lomsebenzi, iphonononga Imiba elungileyo kunye nengalunganga, la ukubaluleka kokukhanya nobumnyama, kunye nobudlelwane phakathi kwendalo kunye nemisebenzi yabantu.
Umsebenzi unomdla, zonke iinkcukacha kunye neziphumo ezinomdla. Ndicinga ukuba bambalwa abathengisi bamatye abakhoyo ngoku. Ndiyathemba ukuba ulithandile eli nqaku.
Fuente [UMateyu simmonds]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Umkroli uMateyu Simmonds ubaza ubugcisa bangaphakathi kwiibhloko ezincinci zemabhile kunye namatye
Iimbasa ezincinci ezifihla indalo ngaphakathi